Astaanta shirkadda | Shirkadda Zhongrong Technology Co., Ltd.
Zhongrong Technology Corporation Ltd (lambarka kaydka: 836455), waxaa la aasaasay 1999 kaas oo ka mid ah shirkadaha Shiinaha ee Shiinaha ee ku takhasusay R&D, wax soo saarka iyo suuq geynta ethanol aan hadhuudh lahayn oo leh alaabteeda hoose. Waa soo saaraha ugu weyn ee aan soo saareyn ethanol ee Shiinaha, iyo soo saaraha ugu weyn ee acetate ee Waqooyiga Shiinaha iyo Waqooyiga-Bari Shiinaha. Badeecadaha waxaa loo iibiyay labadaba suuqyada gudaha iyo Aasiya, wadamada yurub iyadoo sanadkii ay soo gasho USD150 milyan. Waxay leedahay laba shirkadood oo hoosaadyo wada leh, Tangshan Zhongrong Technology Co., Ltd. iyo Shanghai Zhongrong Technology Co., Ltd.
Shirkadda Zhongrong Technology Corporation waxay leedahay 3 Gobol R&D Center waxayna heshay in ka badan 11 guulo cilmiyeed iyo farsamo oo ka sarreeya heerarka hoggaaminta gudaha, iyo sidoo kale in ka badan 42 shatiyada caalamiga ah & kuwa gudaha. Waa sharaf weyn inaan qabannay Barnaamijka Tooshka Qaranka iyo Barnaamijka Waxsoosaarka Cusub ee Qaranka. Waxaan nahay shirkaddii ugu horreysay ee Shiinaha si aan u horumarinno ethanol aan hadhuudh lahayn oo aan u gaarno guulo iyo sidoo kale shatiyada la xiriira. Waxaan haynaa aqoon sare oo dhanka maamulka ah iyo hibooyin teknolojiyadeed oo ka socda jaamacado badan oo caan ah, waxaanan noqonay curiyaha iyo aasaasaha heerka warshadaha Shiinaha ee ethyl ethanol.